Cunto loogu talagalay fikirka, Kaniisadda Adduunka ee Ilaah Switzerland (WKG)
Maqaalka cadhaysan ee fikirka
John Bell wuxuu fursad u helay inuu sameeyo wax aan rajeyneyno inteena badan weligeen ma awoodi doonno inay sameeyaan: Wuxuu qalbigiisa ku qabtay gacmihiisa. Labo sano ka hor, wuxuu maray wadno-tallaal lagu guuleystay. Thanks to barnaamijka wadnaha ee wadnaha ee Xarunta Caafimaadka Jaamacada Baylor ee Dallas, wuxuu hadda awooday inuu qabto qalbigiisa hayey inuu sii noolaado 70 sano kahor intaan loo baahnayn in la badalo.
Weligaa ma joogtay dadweyne aad u tiro badan halkaas oo aad ka dareemeysay yar iyo qiimo yar? Mise waxaad ku fadhiisatay diyaarad waxaadna aragtay in dadka dhulka jooga ay u yaryihiin sida dhiqlaha? Mararka qaar waxaan u maleynayaa in Ilaah hortiisa aan ugu egnahay sida kuwa doog jilicsan oo boodhka ku daadanaya. Ishacyaah 40,22: 24 Eebbe wuxuu yidhi: Isagaa looga fadhiyaa carshiga dhulka, Kuwa degganuna waa sida ubaxa oo kale. Isagu wuxuu u fidiyaa samooyinka sida ...
Caruurnimadeyda ahaan, waxaan waqti la qaatay ilmaadeerkay oo ku nool beerta Ayeeyo. Waxaan u dhaadhacnay balliga waxanan dooneynay wax xiiso leh. Maxaan ka helnay halkaas, waxaan qabsannay rahyo, waxaan ku dhex soconnay dhoobada waxaanan ogaanay qaar deggan oo caato ah. Dadka waaweyni lama yaabin markii aan guriga u nimid iyagoo wasakhaysan oo dabiici ah, oo aad uga duwan markii aan tagnay. Barkaduhu badanaa waa meelo ay ka buuxaan dhoobo, algae, naqdiyeyaal yaryar iyo ...
Waxaan caabudaynaa Badbaadiye kacsan. Taas macnaheedu waa in Ciise ku nool yahay. Laakiin meeduu ku nool yahay? Miyuu leeyahay guri? Waxaa laga yaabaa inuu ku sii nool yahay dariiqa ka sii hooseeya kan ku tabarucay hoyga hoylaawe ah. Waxaa laga yaabaa inuu sidoo kale ku nool yahay guriga weyn ee geeska kula jira carruurta la korsado. Waxaa laga yaabaa inuu sidoo kale ku nool yahay gurigaaga - sida kii deerada cawska deriskiisa markuu buko. Ciise xitaa dharkaaga wuu xiran karaa, sida markii aad aheyd mid ...
Inteena ugu badan ayaa akhrinaysay Kitaabka Quduuska ah wakhti dheer, badiyaa sannado badan. Way fiicantahay inaad akhrido aayadaha caanka ah isla markaana naftaada ku duub sida inay yihiin buste diiran. Waxay ku dhici kartaa in aqoonteena ay keento in waxyaabo aan iska indhatirno. Haddii aan u aqrino indhahayaga furan oo aragti cusub, Ruuxa Quduuska ah wuxuu naga caawin karaa inaan aqoonsanno waxyaabo badan oo suurtogal ah inaan sidoo kale xasuusano waxyaabo aan ilaawo ...
Masiixu waa geedka canabka ah, annaguna waxaan nahay laamihii! Canab ayaa loo gooyay inay khamri sameyaan kumanaan sano. Kani waa nidaam fasiraad ah maxaa yeelay waxay u baahan tahay saynis khibrad leh, ciid wanaagsan iyo waqti ku habboon. Beerta canabka ah way wada ruxmadaa oo nadiifisaa canabkiinna, oo waxay fiirisaa midhaha canabka si loo go'aamiyo wakhtiga saxda ah ee goosashada. Waxaa jira shaqo adag oo ka dambeysa, laakiin haddii wax walba ay isku wada habboonaan lahaayeen, waxay ahayd ...
Jeremy wuxuu ku dhashay jidh jilicsan, maskax gaabis ah, iyo cudur daba dheeraaday, oo aan daawo lahayn oo si tartiib tartiib ah u diley noloshiisii ​​yaraa. Si kastaba ha noqotee, waalidkiis waxay isku dayeen inay isaga siiyaan nolol caadi ah intii suurogal ah sidaa darteedna waxay u direen iskuul gaar loo leeyahay. Markay ahayd 12 jir, Jeremy wuxuu ahaa fasalka labaad. Macallinkiisii, Doris Miller, ayaa inta badan quus ka joogay isaga. Wuu ku duldhacay ...
Dhar dhaqista waa mid ka mid ah waxyaabaha aad ogtahay inaad u baahan tahay inaad sameyso haddii aadan u helin qof kale oo adiga kuu sameeyo! Dharka waa in loo kala saaraa - midabyo mugdi ah oo laga soocay kuwa cad iyo kuwa fudud. Waxyaalaha dharka ah qaarkood waa in lagu maydhaa barnaamij jilicsan iyo saabuun khaas ah. Waa suurtogal in tan loo barto sida ugu adag sida aan ku soo qaatay kulliyad. Waxaan galiyay cusub ...
Dhawr sano ka hor, majaajiliiste majaajiliiste oo caan ku ahaa hadaladiisa dhibka leh ayaa u dabaaldegay dhalashadiisa 91-naad. Munaasabadda ayaa isu keentay dhammaan asxaabtiisa iyo eheladiisa, waxaana sidoo kale si wanaagsan uga soo qeybgalay wariyeyaasha wararka. Intii lagu jiray wareysiga xafladda, su’aasha ugu badan ee la saadaalin karo ama ugu muhiimsan ee isaga loogu talagalay ayaa ahayd: "Yaad ama maxaad u aragtaa noloshaada dheer?" Majaajiliiste ayaa ugu jawaabey si kadis ah: "Neefsasho!" Kumaa diidi kara? Waan awoodnay ...
Axdiga Cusub dhexdiisa waxaa ku yaal hal aayad wanaagsan oo rasuul Bawlos uu kaga hadlayo iskutallaabta Masiixa inuu nacasnimo u yahay Gariigta iyo buuqa Yuhuudda (1 Korintos 1,23). Way fududahay in la fahmo sababta uu u samaynayo bayaankan. Ka dib oo dhan, sida laga soo xigtay Giriiggu, casriyeynta, falsafada iyo waxbarashadu waxay ahaayeen baadi goob sare. Sidee qof iskutallaabta lagu qodbay u gudbiyayo aqoonta gabi ahaanba? Maskaxda Yuhuudda, waxay ahayd qaylo iyo ...
Ma xusuusataa markii Ilaah u jeestay Yeremyaah dareenkiisii ​​dheryasameeyaha (Jer 18,2: 6-45,9)? Ilaah wuxuu isticmaalay muuqaalka dheryasameeyaha iyo dhoobada si uu na baray cashar cabsi leh. Farriimaha la midka ah ee adeegsada sawirka dheryasameeyaha iyo dhoobada ayaa laga heli karaa Ishacyaah 64,7 iyo 9,20 iyo Rooma 21. Mid ka mid ah koobabka aan jeclahay, oo aan badanaa u isticmaalo in aan shaah ku cabbo xafiiska, ayaa leh sawir reerkeyga. Intii aan daawanayay iyada ...
Gabadhaydu mar dhow bay i waydiisay: "Hooyo, ma dhab baa in kabadan hal dariiqo oo loo mariyo bisadda"? Waan qoslay. Way ogaatay macnaha ereygaasi, laakiin waxay runtii su'aal dhab ah ka qabtay bisadan liidata. Caadi ahaan waxaa jira wax ka badan hal jid oo wax lagu qabto. Marka ay timaado sameynta waxyaabaha adag, annaga Ameerika waxaan aaminsanahay "xariifnimada qadiimka Mareykanka". Markaa waxaan leenahay goldaloolada: "Baahnadu waa hooyada ...
"Muxuu Eebbe ugu jawaabin ducadayda?",, Waa inuu jiro sabab macquul ah arintaas, had iyo jeer waxaan is leeyahay naftayda. Waxaa laga yaabaa in aanan ku baryin sida uu doonistiisa u yahay, taas oo shuruud u ah kitaabiga ah salaadda jawaabta. Waxaa laga yaabaa in aan wali ku haysto dembiyo noloshayda aanan ka qoomameyn. Waan ogahay in haddii aan ku sii jiro Masiixa iyo eraygiisa, in salaadda ay u badan tahay in laga jawaabo. Waxaa laga yaabaa inay shaki qabaan. Farxaa markay tukanayaan ...
"Hello, magacaygu waa Tammy waxaanan ahay" sharci yaqaan ". Qof ayaa maskaxdayda ku dhaleeceeyay toban daqiiqo ka hor. "Waxaan qiyaasayaa wax la mid ah kulanka" Qaanuunka Sharci yaqaan "(AL). Waxaan ku sii socon lahaa oo sharraxi lahaa sida aan ku bilaabay waxyaalaha yaryar; Waxaan u malaynayay inaan gaar u ahay maxaa yeelay waxaan qabtay sharciga Muuse. Sidaan u bilaabay inaan hoos u eego dadka aan rumaysan isla sidii ...